प्रकृति extraordinarily सुन्दर र अनुपम। यो हरेक एक बोट वा जीवित जीव संसारको एउटा विशिष्ट लाभ छ भन्ने कुनै गोप्य छ। कहिलेकाहीं हामी हाम्रो संसार कसरी अद्वितीय विचार छैन। हामी विस्तृत विश्लेषण यस लेखमा बिरुवाहरु काई परिवार र आफ्नो सुविधाहरू फैलियो। पढाइ पछि, तपाईं मश गर्न भू-भाग धन्यवाद कसरी नेभिगेट गर्न सिक्न हुनेछ।
को mossy बिरुवाहरु बारेमा सामान्य जानकारी
Mosses - एक कम बढ्दै बिरुवाहरु। सामान्यतया, आफ्नो उचाइ मात्र केही सेन्टिमिटर छ। बिरुवाहरु फैलाउन काई कहीं पाउन सकिन्छ। केही मानिसहरू थाहा छ, तर तिनीहरूले नुन सहनु छैन, र यो समुद्र बढ्न छैन, यस कारण लागि हो। सामान्यतया, mosses stems र पात छ। तर, केही प्रजाति तिनीहरूले अनुपस्थित छन्। यो मश पूर्ण तरल अवशोषित कि ज्ञात छ। यसलाई जहाँ चिस्यान को एक उच्च प्रतिशत उपस्थित यसलाई ठीक बढ्दै छ भन्ने कुनै गोप्य छ। Mosses rhizoids को माध्यम द्वारा तरल अवशोषित। पानी बाहेक, ती आफूलाई लागि उपयोगी खनिज अवशोषित। बारहमासी को लगभग सबै प्रकार। अचम्मको कुरा, फैलाउन काई बिरुवाहरु हाम्रो जीवनको धेरै क्षेत्रहरू प्रयोग गरिन्छ।
mosses को प्रमुख सुविधाहरू
केही मानिसहरू यस थाहा छ, तर mossy बिरुवाहरु को पहिलो प्रतिनिधि फिर्ता भयो को Carboniferous अवधि। यो archaeologists द्वारा पाइने जीवाश्म, द्वारा प्रमाणित छ। के संकेत काई बिरुवाहरु फैलाउन छन्? यो तपाईं हाम्रो लेखमा पाउन सक्नुहुन्छ।
आज 20,000 भन्दा बढी छन् mosses को प्रजाति। तिनीहरूले भूमि र पानी अन्तर्गत दुवै बढ्न। mossy बिरुवाहरु को मुख्य विशेषताहरु - यो समूह र जराको को अंकुरण को अभाव। नियम, आफ्नो लम्बाइ केही सेन्टिमिटर भन्दा कुनै बढि छ। संयंत्र को Tissues मा chlorophyll समावेश गर्दछ। यो यस कारण लागि, यसको रंग गाढा हल्का हरियो गर्न हरियो देखि भिन्न हुन सक्छन् छ। यो कि chlorophyll कारण अक्सिजन मा कार्बन डाइअक्साइड रूपान्तरणहरूलाई कुनै गोप्य छ।
यौन फैलाउन काई चिन्ह बिरुवाहरु अलैंगिक भन्दा प्रबल। पहिलो प्रजनन gametes लागि प्रयोग गरिन्छ, र दोस्रो - बहस। Mosses दुई प्रकार मा विभाजित छन् - sloevischnye र पत्तेदार। को reservoirs आफ्नो livelihoods बनाउन कि बिरुवाहरु, शुक्राणु विशेष flagella लैजान। पानी संग कुनै सम्पर्क छ कि प्रजनन प्रक्रिया घटनाको उत्पन्न गर्दैन। बक्समा - मल पछि, अन्डा एक विशेष शरीर गठन गरिएको छ। यो विवाद यसलाई गठन गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई धन्यवाद, फैलाउन काई बिरुवाहरु गुणन मात्र गर्छन, तर पनि फैलियो।
हरियो मश - mossy बिरुवाहरु एक प्रकारको। यो बक्स लामो बाला मा गठन गरिएको छ थियो। साथै, यो एक माथिल्लो भाग र थप कोटिंग छ। यो कि टिप्पण लायक छ , खुट्टा लम्बाइ महान् spores फैलाउने को अर्धव्यास। प्रसार काई बिरुवाहरु मात्र अनुकूल अवस्थामा विकास।
अन्य mosses विपरीत बिरुवाहरु एक एकदम सरल संरचना छ। प्रायजसो, तिनीहरूले मात्र स्टेम र पात समावेश। मूल सिस्टम साथै तिनीहरूले अनुपस्थित भास्कुलर र भास्कुलर बन्डलहरूको पनि छन्। mossy बिरुवाहरु को संरचना तिनीहरूलाई सतहहरु गर्न rhizoids धन्यवाद पालन गर्न अनुमति दिन्छ। हामी पहिले भने जस्तै, तिनीहरूले पनि पूर्ण चिस्यान अवशोषित छन्। यो तिनीहरूले भास्कुलर सिस्टम छैन भनेर टिप्पण लायक छ।
रूखहरू मा काई बिरुवाहरु फैलाउन
काई रूखहरू मा - रोग को पहिलो साइन। हामी यस्तो समस्या लगभग हरेक माली सामना भन्ने विश्वास गर्छन्। कसरी रूख मा मश छुटकारा गर्न? म बन्द सफा गर्न यो आवश्यक छ? यो र अधिक तपाईं यो लेख बाट बाहिर पाउन सक्नुहुन्छ।
केही मानिसहरू थाहा छ, तर बाहिर मात्र आफ्नो विकास धीमा नहीं, रूखहरू आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्य पूरा काई परिवार बिरुवाहरु फैलाउन, तर पनि परजीवी कीरा र आफ्नो लार्वा को धेरै रकम लागि आश्रय हो। यो रूखहरू मा मश तुरुन्तै नाश गर्नुपर्छ भनेर यस कारण लागि हो। यो carbolic एसिड को 250 ग्राम देखि तयार विशेष समाधान आवश्यक छ। यो पानी को एक बाल्टिन संग मिश्रित र गरम राज्य उम्लिरहेको छ। गर्म समाधान सबै neoplasms चिल्लो गर्न आवश्यक छ। एक जोडी पछि mossy बिरुवाहरु को दिन भन्दा हुनेछ।
धेरै माली उपलब्ध धन को मद्दत संग बगैचा रूखहरू मा काई फैलाउन को ट्यूमर बन्द सफा गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। म यो गर्न सक्नुहुन्छ? यो सही प्रक्रिया पालना गर्न आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान लायक छ। यो प्रक्रिया एक धातु स्पाटुला वा ब्रश प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। रूख अन्तर्गत फिलिम वा पलीथीन राख्नु पर्छ। यसलाई तुरुन्तै बाल्न गर्न मश आवश्यकता बन्द खाली गरिएको छ। यो यो समस्या अन्य रूखहरू र माटो फैलियो छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
अर्थ mosses स्वाभाविक अमूल्य। आफ्नो प्रजाति मात्र केही बिरुवाहरु लागि प्रकृति मा परजीवी छन्। यसलाई फेरि मश पेड मा फलिफाप गर्न थाले यसको प्रसार जोगिन गर्न तुरुन्तै निर्मूल हुनुपर्छ जोड गर्नुपर्छ। यसो गर्न, तपाईं यस लेखमा दिइएको छ कि एक नुस्खा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Sphagnum मश - को swamps बढ्न गर्छन कि mossy बिरुवाहरु एक प्रकारको। अक्सर तिनीहरूले ग्रह को उत्तरी भाग मा पाइन्छन्। अक्सर, तिनीहरूले पनि सेतो मश भनिन्छ। यो sphagnum रंग हल्का हरियो रूपमा, अचम्मको छैन, र धेरै टाढाबाट देखि यो सेतो देखिन्छ। अचम्मको कुरा, यो यसको कुल वजन छ भन्दा 20 गुना बढी पानी सम्म अवशोषित गर्न सक्षम छ।
केही मानिसहरू sphagnum mosses लाभ को धेरै ल्याउन भनेर थाह छ। तिनीहरूले अक्सर प्रयोग गरिन्छ निर्माण मा। इन्सुलेशन लागि एक उत्कृष्ट उपकरण छ - यो यो sphagnum मश कि विश्वास छ रूपमा, अचम्मको छैन। यो पनि घर मा मोल्ड र फफूंदी जोखिम कम गर्ने टिप्पण लायक छ। मश यस प्रकारको पूर्ण चिस्यान को अवशोषित भन्ने तथ्यलाई कारण, यो उनको गुण मा धेरै विशेष इन्सुलेशन सामाग्री उच्च छ।
पीट मश को प्रयोग
धेरै मानिसहरू प्रकृतिका mossy बिरुवाहरु को भूमिका के हो आश्चर्य। हामी पहिले बताएअनुसार तिनीहरू लाभ र हानि दुवै बोक्न सक्छ। पीट मश मानिसहरूलाई लागि मात्र होइन तर पनि वातावरण लागि अति उपयोगी छ। यो छ एक बारहमासी बोट, छ जो बलियो branching stems। यो टिप्पण mossy पीट bogs अन्य प्रजातिहरू rhizoids छ विपरीत छ, लायक छ। अन्य mosses जस्तै पीट मात्र एक एकदम नम ठाउँमा अङ्कुराउन। पानी संग सम्पर्क तिनीहरूले माटो हिले। साथै, पीट गठन गरिएको छ। यो अक्सर एक मल रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यो पीट माटो गुणस्तर सुधार गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका मानिन्छ।
लाभ mossy बिरुवाहरु
हामी पहिले भने जस्तै, त्यहाँ bryophytes बिरुवाहरु को 20,000 भन्दा बढी प्रजाति छन्। तिनीहरूले विश्व को लगभग सबै कुनामा बढ्न। प्रकृतिका mossy बिरुवाहरु को भूमिका कस्तो छ? यो र अधिक तपाईं हाम्रो लेखमा पाउन सक्नुहुन्छ।
सानो-जानिन्छ, तर mosses, साथै अन्य बोट सक्रिय कार्बन डाइअक्साइड अवशोषित र अक्सिजन उत्पादन। तिनीहरूले पृथ्वीको जीवमण्डल Name अभिन्न भाग हो। र यो फैलाउन काई बिरुवाहरु adversely मानव शरीर असर जो, रेडियोधर्मी पदार्थ अवशोषित गर्न सक्षम छन्।
Mosses जनावर लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। तिनीहरूलाई लागि, तिनीहरूले अक्सर खाना हो। चरा लागि फैलाउन काई बिरुवाहरु शरणस्थान र एक घर छन्। अर्थ mosses स्वाभाविक अमूल्य। केही मानिसहरू थाहा छ, तर पछिल्लो समय मश सक्रिय औषध प्रयोग गरिएको छ। उदाहरणका लागि, रक्सी पीट सिर्जना गरिएको छ। खैर, ठीक किनभने यो पनि इन्धन बनाउँछ। प्रयोग cosmetology मा काई बोट फैलियो। ती मास्क, क्रीम र Scrubs को एक ठूलो संख्या सिर्जना गर्नुहोस्। यस्तो रकम छाला टोन र बुढ्यौली सुस्त।
फैलाउन काई बिरुवाहरु वातावरण र मानव शरीर मा एक सकारात्मक प्रभाव पार्न। ठीक प्रयोग गर्दा, तिनीहरू मात्र होइन आफ्नो घर ढाक्नु हुनेछ, तर पनि पहिले उमेर बढन देखि एक व्यक्ति बचत गर्नुहोस्।
sphagnum मश को उपयोगी गुणहरू
संयंत्र को विभिन्न विभागहरु सकारात्मक वा नकारात्मक या त वातावरण र जीवित जीव मा असर हुन सक्छ। केही मानिसहरू थाहा छ, तर sphagnum मश सक्रिय चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ। अचम्मको कुरा, यो लाउने उपकरण रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसले उच्च जीवाणुरोधी गतिविधि छ रूपमा, अचम्मको छैन। यो अक्सर युद्ध को समयमा प्रयोग गरिएको छ। आज अक्सर प्रयोग गरिन्छ। नियम, यो खुला भंग मा प्रयोग गरिन्छ। यस मामला मा, sphagnum घाउ सीधै लागू गरियो।
जीवाणुरोधी कार्य गर्न साथै, उहाँले पनि गुण निको भएको छ। यसलाई सक्रिय बल्न र शीतदंश लागि प्रयोग गरिन्छ। घर मा, sphagnum मश संक्रामक रोगहरु रोक्न प्रयोग गरिन्छ। यो उद्देश्य लागि, यो तातो पानी भरिएको र यो मिश्रण स्नान संग लिइरहेको छ। यो प्रक्रिया प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। साथै, यो उपकरण फंगल छाला रोग हटाउनेछ।
कसरी भू-भाग नेभिगेट गर्न मश प्रयोग गर्ने?
यस भू-भाग नेभिगेट गर्न - कि के बिल्कुल सबैलाई सक्षम हुनुपर्छ छ। केही मानिसहरू थाहा छ, तर फैलाउन काई बिरुवाहरु तपाईं सजिलै सही बाटो पत्ता अनुमति दिन्छ। हामी पहिले भने जस्तै, mosses जहाँ उच्च आर्द्रता प्रबल बाँचिरहेका छौं। तिनीहरूले अत्यधिक प्रकाश सहन गर्न सक्दैन। दिशा सही बाटो निर्धारण र पत्ता लगाएर, उदाहरणका लागि, जंगल मा, तपाईं पहिलो मश बढ्छ कि एक रूख फेला पर्छ। यसलाई पूर्ण यी बिरुवाहरु ढाकिएको छ भने, तपाईं कहाँ यो भन्दा सक्रिय बढ्दै छ अंश फेला पार्न आवश्यक छ। यो तपाईँले उत्तर दिशा निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
यस लेखमा दिइएका छन् भनेर सरल निर्देशन सम्झना। तिनीहरूलाई धन्यवाद, तपाईंलाई द्रुत भू-भाग नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ।
mossy बिरुवाहरु को नकारात्मक गुण
विभिन्न बोट विभाग वातावरण र मानव स्वास्थ्य मा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्ने हुन सक्छ। काई बिरुवाहरु फैलाउन - कुनै अपवाद छ। हामी पहिले भने जस्तै, तिनीहरूले अक्सर रूखहरू मा परजीवी हो, र जसबाट उनको वृद्धि सुस्त।
mosses संग एकदम अक्सर पनि aquarists संघर्ष गर्दै छन्। यो बोट एकदम छिटो छ रूपमा clog पानी लागू यो, अचम्मको छैन। यो यस कारण लागि, जलजीवालय मा माछा सहज र विभिन्न रोगहरु र संक्रमण सबैभन्दा खतरा महसुस छैन छ। पानी शुद्ध गर्न, तपाईं खान मश प्रयोग विशेष घोंघे खरिद गर्न आवश्यक छ। सामान्यतया, पूर्ण शुद्ध लागि यो एक महिना लिनेछ। केही कारणले तपाईं रुचि थियो भने, स्टोरमा जानुहोस्। तिनीहरूले तपाईंलाई चाँडै अनावश्यक mossy तपाईं राहत एक विशेष उपकरण टिप्न मदत गर्न सक्छ मछलीघर मा बिरुवाहरु।
हामी कारण माटो मा मश फैलाउने गर्न, पहिले उल्लेख रूपमा waterlogging आउँछ। यस्तो प्रक्रिया अत्यधिक खराब छ। waterlogged क्षेत्रहरू मा बाली बढ्न असम्भव। प्रसार काई बिरुवाहरु दुवै सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छ। तथापि, तिनीहरूले विकास वातावरण मा एक अपरिहार्य तत्व हो।
आज फैलाउन काई बिरुवाहरु सक्रिय हाम्रो जीवनको लगभग सबै क्षेत्रहरू प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले निर्माण, कस्मेटिक्स र औषधि प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले मात्र होइन सकारात्मक तर पनि नकारात्मक प्रभाव वातावरण र मानव स्वास्थ्य मा छ। तैपनि मश - यो जैविक श्रृंखला मा एक अपरिहार्य लिङ्क हो। यो तपाईं एक फंगल संक्रमण छ भने, यो प्लान्ट तपाईं यसलाई छुटकारा प्राप्त गर्न सबैभन्दा कुशल तरिका अनुमति दिन्छ छ कि टिप्पण लायक छ। हामी दृढता भू-भाग नेभिगेट मदत गर्न सुझाव सम्झना गर्न सुझाव दिन्छौं। यसरी, तपाईं जहिले पनि कठिन अवस्था बाहिर, उदाहरणका लागि जंगल मा प्राप्त गर्न सक्छन् र सही बाटो पत्ता। वातावरण जोगाउन!
मकै - संस्कृति लागि छ? Mais: वर्णन, संरचना, उपयोगी गुणहरू
'Tavanic' एंटीबायोटिक। प्रयोगको लागि निर्देशन
होटल ओलम्पिक होटल3* (मोन्टेनेग्रो, Ulcinj): समीक्षा, वर्णन र समीक्षा
अक्टोबर मा Crimea मा आराम: मौसम, समुद्र, समीक्षा
जाली बाड - विश्वसनीयता र अद्वितीय शैली
नुस्खा: दुग्ध उत्पादन, नरम चीज र अन्डा देखि सस shavermy